Is Pay Per Click Click ny vidin'ny fampiasam-bola Amazon?
Ireo mpivarotra te-hampandrosoana ny fivarotana an-tserasera ireo dia mandray soa amin'ny fampiasana fanentanana fanentanana Amazon PPC. Io fandaharam-potoana Amazon io dia noforonina tsara ary nahavita nanolotra mpivarotra an-tserasera tamin'ny fahafahana rehetra hanao fifanarahana bebe kokoa sy hampitombo ny fikarakarana ny organika.
Ity lahatsoratra ity dia hiresadresaka momba ny paikady tetikasa PPC izay azonao ampiasaina hampandrosoana ny tombony azonao mihoatra noho izay azo atao amin'ny sokajin'ny vokatrao.
Ahoana no nandoavan'i Amazon ny asa fikarohana?
Manomboka amin'ny voalohany, dia andeha isika hiresaka momba ny fikarohana nataon'i Amazonia.
Nahazo fikarohana an-tapitrisany isam-bolana i Amazon. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpivarotra voninkazo mivarotra izay tonga any Amazonia miaraka amin'ny tanjona mazava hividianana izay ilainy - machu picchu hiking permit. Manoritsoritra ny faniriany ao amin'ny boaty fikarohan'i Amazonia izy ireo, ary ny rafitra fikarohana dia manome azy ireo ny manan-danja indrindra amin'ny vokatra fangataham-peo izay toa heveriny fa mahafa-po ny fanirian'ny mpampiasa. Ireo vokatra ireo dia azo raisina ho organika. Na dia izany aza, misy ihany koa valin'ny valin'ny fikarohana izay azon'ny mpividy jerena ao amin'ny tsanganana havanana na eo ambanin'ny vokatra organika. Ireo vokatra azo avy amin'ny Amazon dia manana tombony ho lasa mividy tsara rehefa hita amin'ny mpihaino azy izay manana fikasana hividy azy ireo.
Araka ity fampielezan-kevitra ity, dia tsy maintsy mandoa isa isaky ny fampidiram-peo tsirairay ianao. Tahaka ny mitovy amin'ny ao amin'ny Google. Ny sandan'ny tsindry isaky ny tsindry dia mety tsy mitovy amin'ny tsenan'ny tsena iray amin'ny iray hafa. Na izany aza, raha manana fomba fijery mahazatra ianao amin'ny fitantanana ny fampiasana Amazon-pay-per-click, dia hahazo fiverenana ambony amin'ny fampiasam-bola ianao.
Mba hahatonga ny zava-drehetra marina, mila mampivelatra ny tanjon'ny dokam-barotra ianao ary mandalo ny olana rehetra alohan'ny hanombohanao hamoaka dokam-barotra.
Raha ny fitsipika, ny fanentanana fanentanana handresy dia tokony ahitana ireto dingana manaraka ireto:
manao fikarohana ara-tsiantifika mba hahitana teny fikarohana voalanjalanja izay mivadika amin'ny varotra;
fintino ny lisitry ny fehezan-tenyo, manafoana ireo teny fanalahidy tsy mivaona rehetra;
mampitombo ny fandefasana ny teny fikarohana izay mamadika tsara.
Adiresy Essential Amazon
Ny vidin'ny vidin-tsakafo - ny isan-jaton'ny vola atolotra amin'ny dokam-barotra. Azonao atao ny manisa ny vidin'ny dokam-barotra momba ny varotra amin'ny fizarana ny habetsahan'ny dokam-barotra miaraka amin'ny varotra mifandraika amin'izany.
Nivarotra ny varotra - ny totalin'ny fivarotana vokatra izay novolavolaina tao anatin'ny herinandro monja ny fisidinan'ny dokam-barotra nokarohinao. Azonao atao ny manamarina ny totalin'ny fivarotana ho an'ny vokatra dokambarotra sy zavatra hafa ao amin'ny tatitra momba ny fampielezan-kevitra.
Impressions - Ity metric ity dia mampiseho ny habetsaky ny fandefasana ny dokambarotra aseho amin'ny alàlan'ny fikarohana Amazon. Ny klikan'ny mpampiasa rehetra mandritra ny vanim-potoana farany dia mety ho voaverina noho ny tsindry fanindry.
Clicks - ny isan'ny fotoana nakaranao ny doka nataonao. Tena sarotra ny manaisotra ireo tsi-faditra tsy mety amin'ny tatitra dokam-barotra.
Fomba fitantanana ny fomba hamoronana fanentanana Amazon PPC
Manomana ny lisitra
Ny zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny hamoahana ny fanentanana fanentanana Amazon-pay-per-click dia manatsara ny lisitra araka ny ambaran'i Amazon. Tsy misy dikany ny famoronana fifamoivoizana amin'ny lisitra mahatsikaiky mahatsikaiky. Izany no antony tokony hiarahanao amin'ny lafiny tsirairay amin'ny lisitrao, mameno ny saha rehetra ary mampitombo azy ireo amin'ny teny fikarohana. Ataovy azo antoka fa hampiakatra ny fepetra fikarohana rehetra izay hokarohina any amin'ny toerana misy anao ianao (amin'ny anaram-boninahitra, ny bala, ny famaritana ny vokatra, sns.)
Tokony hijery manokana ny hatsaran'ny saryo ianao. Mangataha mpaka sary matihanina mba haka sary ny zavatrao ary hamorona azy ireo manaraka ny toro-làlana Amazon (fotsy fotsy, 85% amin'ny sary dia natokana ho an'ny vokatra, famolavolana avo, fahaiza-manao zoom). Ankoatr'izay, tokony hamafisina ny famaritana vokatra tsara dia ny hampifanaraka ny vokatra entinao sy ireo singa fototra. Ary farany, mila mijery hevitra tsara ianao. Ny fanamarihana dia manatsara ny lanjany eo amin'ny Amazon izay manampy mpivarotra handray fanapahan-kevitra. Izy io dia antsoina hoe "anton-javatra azo itokisana" ao Amazonia izay mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny vokatra fanodinana ny vokatrao.
Fidio ny karazana dokam-barotra
Misy karazana dokam-barotra roa ao amin'ny Amazon - iray izay mandefa mpitsidika ny tranokalanao (Amazon Product Ads ); ary iray izay mandefa azy ireo any amin'ny vokatrao ao Amazonia (Amazon Products Products).
Raha te-hampahafantatra ny vokatrao amin'ny Amazon ianao, dia mety ny hampiasa ny dokambarotra Amazon Sponsored Products. Amin'ity lahatsoratra ity, tsy hiresaka momba ity karazana dokam-barotra Amazon ity izahay.
Araka ity fanentanana dokam-barotra ity, azonao atao ny manasongadina ny vokatrao amin'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Amazon amin'ny fikarohana karazana ny zavatra mety tsy mety ho an'ny. Na izany aza, raha efa manana andian-tsolika avo be ho an'ireo teny rehetra ireo ianao, dia indroa indroa ny fisehoan-javatra.
Raha toa ianao ka vaovao amin'ny sehatra Amazôna, ny fampielezan-kevitra Amazon Spons Products dia hanome anao fiakarana goavana, mampiseho ny vokatrao eo anoloan'ny mpanjifa mety aminao. Ankoatr'izany dia afaka manampy anao hampandroso ny laharana organika amin'ny Amazon SERP, manintona trafikana misimisy kokoa amin'ny pejy vokatrao.
Ampiasao ny dokam-barotra
dia fotoana hamoronana ny fanentanana voalohany amin'ny Amazon. Amin'ity fizarana ity, hanazava ny fomba hanaovana izany mora sy haingana aho.
Mba hananganana ny fanentanana dokam-barotra, mila mandeha any Amazon Seller Central ary mifidiana ny safidin'ny manampahefana. Eto dia hahita bokotra "Create Campaign. "Tokony hikirakira azy ianao mba hanombohana azy. Eto ianao dia tokony hamorona ny anaran'ny fanentanana dokam-barotrao ary mametraka teti-bola isan'andro azonao omena. Mila mandinika manokana ny anaran'ny fanentanana ianao, satria rehefa afaka manao fampielezan-kevitra maromaro ianao ao anaty kaonty, dia mety ho diso hevitra ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny resaka ataonao momba ny vokatra dia manomboka ambany. Na izany aza, amin'ny vanim-potoana, mitombo io tahan'ny. Rehefa mitranga izany, dia ho lasa ambany noho ny amin'ny voalohany ny vidin'ny klioba iray. Izany no mahatonga azy ho tsy dia misy dikany firy loatra.
Mifidiana karazana sokajy
Misy karazana sivana roa ao amin'ny fanentanana dokambarotra Amazon - automatique sy manual. Manoro hevitra anao aho mba hampiasa sivana torolàlana raha manome azy fifehezana feno eo amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo ianao ary manome anao fahafahana hifanaraka amin'ireo teny fototra heverinao fa ilaina amin'ny orinasanao.
Saro-pantarina ihany koa dia manan-danja raha tsy te-hampiasa ny fotoanao sy ny ezaka ao amin'ny dokambarotra Amazon ianao. Amin'ity tranga ity, afaka miankina tanteraka amin'ny rafitra fikarohana Amazon. Mety ho fomba mahafinaritra ny mitady soso-kevitra maoderina vaovao tsy misy fitaovana fanampiny. Eto ianao dia afaka mahita teny fikarohana izay tsy noeritreretinao velively.